IClimate Alliance iphakamisa umthetho omusha omelene nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kuya ngokuya kukhula futhi kuyaphuthuma ukuqala ukushaya imithetho esiza ukunciphisa imiphumela yayo. Isimo Sezulu Alliance Inhloso yawo ukumisa imiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu futhi, uma unikezwa umthetho omusha ohlongozwayo, badinga ukubamba iqhaza komphakathi ukuze kube yisisekelo.
Umthetho Wokuguquka Kwesimo Sezulu Noguquko Lwezamandla Ihlanganisa ndawonye izinhlangano zomphakathi ezingaphezu kwamakhulu amane kanti namhlanje yethule isiphakamiso sokuqukethwe sokuthi izinga elizayo lizovunywa.
Lo mthethosivivinywa unomgomo wokuvelela wamandla ukunciphisa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa futhi kusheshise inqubo yokuguqulwa kwamandla, kusuka kumafutha wezinsalela kuya emandleni avuselelekayo nakwamanye amandla angcolisa kancane. Kuhloselwe ukuthi lezi zinguquko zenziwe ngendlela "engenzeleli" namazwe kanye nemikhakha yabantu abasengozini enkulu nabampofu ukuze wonke umuntu abe nakho futhi ajwayele leli thuba elisha lokufaka isandla ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu.
Lo mthethosivivinywa futhi usekela zonke lezo zinyathelo ezabiwayo futhi ezithandayo ubulungiswa besimo sezulu nazo zonke izinqubomgomo zentuthuko esimeme. Phakathi kwezenzo ezizokwenziwa, kwenziwa umzamo wokunciphisa ukunwetshwa kwezindawo zokuhlala nezamabhizinisi ukuze ukukhushulwa kwezimoto futhi ngenxa yalokho kungcolise ukungcola emkhathini nakho kukhawulelwe.
Ngakolunye uhlangothi, kuhloswe ukuthi kwakhiwe uhlelo lokunciphisa ukuguquguquka kwesimo sezulu emkhakheni wezolimo ofaka imisebenzi efana nokulima okuphilayo. Lolu hlelo lubheka futhi ukunciphisa inani lemikhakha enikezwa mahhala emalungelweni okuphuma ukuze ikhuphuke decarbonisation yezimboni, ukwethulwa kwe-Eurovignette noma intela entsha ye-EU kuthrafikhi kunethiwekhi yomgwaqo kanye nokuhlelwa kabusha kwezikhuthazo zamanje ama-biofuel kwesizukulwane sokuqala esivuna owesibili nowesithathu, phakathi kweminye imibono.
Ekugcineni, kubalulekile ukuthi kungashaywa umthetho ohlinzekayo uhlaka oludingekayo lwezomthetho nolwezimali Ukugcina zonke lezi zinqumo zizinzile ngokuhamba kwesikhathi, ngoba kuyadingeka ukugcina ukulingana phakathi kwezinqumo zemvelo, ezenhlalo, ezepolitiki, ezomnotho nezokuziphatha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » IClimate Alliance iphakamisa umthetho omusha omelene nokuguquka kwesimo sezulu